China igwe anaghị agba nchara Cut Waya Shot factory na-emepụta | Feng Erda
Nlereanya / Nha:0.2-2.5mm
Igwe anaghị agba nchara shot waya bụ anyị akpan akpan special.It ka nke SUS200, 300, 400 usoro igwe anaghị agba nchara waya bee n'ime agba. Igwe anaghị agba nchara ịkpụ waya shot a na-eji na-amụba ọnụ ọgụgụ nke ngwa dị mkpa ebe ferrous ofufe na ọgbụgba ọkụ igwe anaghị agba nchara, titanium, aluminom, ma ọ bụ ndị ọzọ na-abụghị ferrous ọrụ ihe nwere ike na-emerụ. A na-ejikwa ya na ịchacha ọla ndị a (igwe anaghị agba nchara, titanium, ọla ma ọ bụ aluminom) na ihe ndị na-arụ ọrụ nke nwere ike ịnwe nrụgide nrụrụ.
7.8g / cm
Kenkowaputa rustless elu, cylindrical udi
Raw Ihe onwunwe :
Ọnọdụ akụ na ụba maka iji nchara igwe anaghị agba nchara na-arụ ọrụ na ikpocha nhicha na-adị mfe ịme. Bee waya anaghị agbaji ma ọ bụ gbarie n'oge eji n'ihi na ọ bụ mpempe akwụkwọ siri ike. N'ihi ya, ị ga-enweta uru ndị a:
Stainless steel cut waya shot nwere a budata ogologo ndụ bara uru karịa nkedo ígwè shot ma ọ bụ grit na carbon ịkpụ waya shot
Ọgbọ ustDust dị obere nke ukwuu - ọrụ ọgbụgba ọkụ na-adị ọcha karịa
Igwe anaghị agba nchara ịkpụ waya na-arụpụta ezigbo nsonaazụ n'ihi ịdị n'otu na ike ya
Ọ ga - eme ka ị bụrụ nzukọ "Greener" n'ihi na mkpofu nke mgbasa ozi mebiri ga-ebelata nke ukwuu. (Won't gaghị achọ ihe dị ukwuu, ihe achọrọ ga-adị ala, na ụgbọ mmiri na-abaghị uru ga-efu obere.)
Ou⑤BUGH introduce ewebata ihe na-eme ka ndi mmadu ghara ikpochapu ihe ma obu ihe ndi ozo dika dika o mere na nkedo nkedo ma obu oku ogwu.
Ngwa: Na - egbochi mmetọ Ferrous mgbe ọ na - agbawa ma ọ bụ na - agbaze igwe anaghị agba nchara, titanium, aluminom, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na - enweghị ọrụ.
Nkọwapụta: Ọ dị n'ụdị ọnọdụ nwere asambodo iji zute MILS 13165C, SAE J441, na nkọwapụta aerospace AMS 2431/4. Igwe anaghị agba nchara Cut Waya Shot nwere a Rockwell C ekweghị ekwe nke 50 - 58 HRC
Ngwa: Maka ịkwadebe aluminom maka iwepụ agba yana na aluminom na-anwụ maka ịtọpụ na imecha.
Csdị: Na-egbochi ọrịa na-efe efe - mana dị nro (na HRC 30 - 35) na ọnụ ala karịa 300 Series Stainless.
Nke gara aga: Obere Carbon Na-agbaze Steel Shot
Osote: Ferro Molybdenum
Gbara gbawara igwe anaghị agba nchara
Igwe anaghị agba nchara Shot ọgbụgba ọkụ
Igwe anaghị agba nchara Shots